Date My Pet » 5 Zvinhu Zvaunofanira Usatambisa Talking About On A Date First
A zuva rokutanga inogona kuva chitsauko ane rungano rokutanga, asi rinogonawo kuva zvachose njodzi chete nokuti akabata ane "rokuvaudza" musoro. Kuwana rudo sokuti saka nyore mumafirimu, asi zvakangofanana muupenyu chaihwo? Romance hapasi kubhururuka zvakanaka, uye kuwana mweya wako hakusi nyore kuti mumwe nomumwe wedu. Dzimwe nguva mumwe mubvunzo kuziva sei kurwisa nokuti, uye sei kudzivisa kuita faux baratos, kunyanya uri musi wokutanga. Kunyange zvazvo izvi ndiyo nguva apo uchiedza kuziva zvinhu pamusoro peiko, zvakanaka here kuomerera wakachengeteka kukurukura nyaya. Heano unofanira kudzivisa kutaura pamusoro wako zuva rokutanga zvimwe zvinhu:
Hapana anoti sezvaunoita enyika havana kukosha, asi havana Havamboendi kuita yakachengeteka kukurukura nyaya kuti zuva rokutanga. Kurera zvematongerwo enyika kuti chete kusika pave daka, uye izvi hazvisi zvaunoda. zvakadaro hazvo, hamungambovi kuita Republican ave democrat kana vakutarisire ... kanenge kwete panguva iri ukama hwako.
Kana usiri munhu kuyaruka, zvirokwazvo vamwe vakakundikana ukama Portfolio yako, uye ichi ndicho zvakakwana yakanaka. Munhu wose anoita. Hazvinei zvauinazvo kutaura pamusoro Eks / exes, musi wokutanga haisi nguva yokuti kukurukura. Aiva iye ari kutonga mbwakadzi? Akanga zvachose jerk? Ichi hachisi chinhu uchida kuudza mumwe munhu iwe mangosangana sezvo iye / angafunga uri chimwe chinhu asi mweya zvinovava. Kana Ukuwo, imi mune mashoko chete chikuru kutaura nezvazvo, iwe usiye pfungwa hamuna kuwana pamusoro pavo, uye imi hamuzi, saka, tagadzirira kutanga rimwe ukama. Kana zuva rako akaedza kutsvaka nei iwe vakarambana vane Eks, kupa mhinduro isina kujeka kuti harina mhosva kana achikudza.
Your kwete Ndikachenesa kare
Cleaner kana dirtier, isu tose tine kare, uye izvi hazvirevi hatizi kodzero kuwana rudo. zvisinei, izvi hazvirevi here kuti uzvikudze pamusoro wako kare misshapes rako zuva rokutanga. Uchava kuuya yakachena pamusoro zvimwe zvinhu zvinenge pane imwe pfungwa pakutanga zvokukura ukama hwako, asi haufaniri unozvidzinga zuva rako kubva kekutanga ukasangana.
Nguva sezvainofamba, vakadzi kunyanya, asi varume kutanga kunzwa kwavo wachi ticking. Unofanira zera iroro apo unoda kutanga mhuri uye kuva vana, asi zvinokurudzirwa here kutanga kuwana kodzero naye nokuti. Regai pengoro pamberi bhiza!
Chaunofarira pabonde nzvimbo
Pasinei unotsaukira uri uye chii unofarira kuita mubhedha, hachisi chinhu chokutanga unoda zuva rako kuziva pamusoro pako. Saizvozvowo, ichi hachisi chinhu chinonyanya kukosha chaunoda kuziva pamusoro zvinogona mudiwa. Mirira kusvikira wazviita zvakarurama nenhanho hwepedyo kutaura izvi.